သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆင်တူလေးဝတ်ရလို့ ပင်ပန်းတယ်မထင်ဆိုတဲ့ သက်မွန်မြင့်
9 Sep 2018 . 11:04 PM
သူငယ်ချင်းတွေနဲံ့ ခရီးအတူတူထွက်ပြီးတော့ ဆင်တူလေးတွေဝတ်ကာ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာကို မပင်ပန်းဘူးလို့ သက်မွန်မြင့် ကအခုလို ဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ သက်မွန်မြင့်နဲ့ အတူတူ ခင်လေးနွယ် ၊ ဖူးစုံ ၊ မိုးပြည့်ပြည့်မောင်၊ မေကဗျာ တို့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။
“သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆင်တူလေးတွေဝတ် အတူတူ ဓါတ်ပုံရိ်ုက်ရတာဆိုတော့ ပင်ပန်းတယ်လို့ကို မထင်!
ငယ်ဘဝမှာ အကုန်လုံးက အလုပ်ထဲနှစ် ရုန်းကန်ခဲ့ကြရသူတွေချည်းပဲဆိုတော့ ဒီချိန်မှ ဒီလိုအခွင့်ရေးရတာ
ကျေနပ်တယ်” လို့ဆိုပြီး တော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သက်မွန်မြင့် နဲ့ အတူတူပျော်ရွှင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်ဆင်တူလေးတွေ ဝတ်လို့ လှနေကြတာကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။တချိန်လုံး အလုပ်တွေ နဲ့ ရုန်းကန်ခဲ့ကြရတဲ့သူတို့ အတွက်တော့ ဒီလိုအချိန်လေးတွေ ကလည်း ပျော်ရွှင်စရာ အမှတ်တရ တစ်ခုပါပဲ ။
Photo Credit: Thet Mon Myint Facebook Page
သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ဆငျတူလေးဝတျရလို့ ပငျပနျးတယျမထငျဆိုတဲ့ သကျမှနျမွငျ့
သူငယျခငျြးတှနေဲံ့ ခရီးအတူတူထှကျပွီးတော့ ဆငျတူလေးတှဝေတျကာ ဓါတျပုံရိုကျရတာကို မပငျပနျးဘူးလို့ သကျမှနျမွငျ့ ကအခုလို ဆိုလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ သကျမှနျမွငျ့နဲ့ အတူတူ ခငျလေးနှယျ ၊ ဖူးစုံ ၊ မိုးပွညျ့ပွညျ့မောငျ၊ မကေဗြာ တို့ပါဝငျတာဖွဈပါတယျ။
“သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ဆငျတူလေးတှဝေတျ အတူတူ ဓါတျပုံရိုကျရတာဆိုတော့ ပငျပနျးတယျလို့ကို မထငျ!
ငယျဘဝမှာ အကုနျလုံးက အလုပျထဲနှဈ ရုနျးကနျခဲ့ကွရသူတှခေညျြးပဲဆိုတော့ ဒီခြိနျမှ ဒီလိုအခှငျ့ရေးရတာ
ကနြေပျတယျ” လို့ဆိုပွီး တော့ဖျောပွထားတာဖွဈပါတယျ။
သကျမှနျမွငျ့ နဲ့ အတူတူပြျောရှငျနတေဲ့ သူငယျခငျြးတဈသိုကျဆငျတူလေးတှေ ဝတျလို့ လှနကွေတာကိုလညျး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။တခြိနျလုံး အလုပျတှေ နဲ့ ရုနျးကနျခဲ့ကွရတဲ့သူတို့ အတှကျတော့ ဒီလိုအခြိနျလေးတှေ ကလညျး ပြျောရှငျစရာ အမှတျတရ တဈခုပါပဲ ။